လှပသောလက်ဆောင်များ - Worldwide of God of Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-03 > လှပသောလက်ဆောင်များ
တမန်တော်ယာကုပ်က သူ၏စာထဲတွင် ဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “ကောင်းသောဆုကျေးဇူးရှိသမျှနှင့် စုံလင်သောဆုကျေးဇူးရှိသမျှတို့သည် အလင်းနှင့်အမှောင်၏အဖထံတော်မှ အထက်မှဆင်းသက်လာပြီး၊ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ အလင်းနှင့်အမှောင်၏အဖထံတော်မှ ဆင်းသက်လာကြသည်။” (ယာကုပ်၊ 1,17).
ဘုရားသခင်၏လက်ဆောင်များကိုကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါသူသည်အသက်ကိုထုတ်ပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သည်။ အလင်း၊ သဘာဝ၏ခမ်းနားထည်ဝါမှု၊ ရွှေနေထွက်၊ ဆီးနှင်းဖုံးတောင်ထိပ်များမှနေ၏အရောင်များ၊ သစ်တောများ၏စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းစိုပြည်မှု၊ ငါသူတို့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ယူမှသာငါတို့အားလုံးလေးစားနိုင်သည့်အခြားအရာများစွာကိုငါမြင်၏။ သင်၏ယုံကြည်ချက်မည်သို့ပင်ရှိပါစေဘုရားသခင်သည်ဤအရာအားလုံးကိုများပြားစွာပေးသနားသည်။ ယုံကြည်သူ၊ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ၊ မသိဝါဒီ၊ မယုံကြည်သူနှင့်မယုံကြည်သူအားလုံးသည်ဤကောင်းမွန်သောဆုကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည်မိုit်းရွာစေသဖြင့်၊ ဒီလူကောင်းအားလုံးကိုဒီလက်ဆောင်တွေကိုပေးတယ်။
နည်းပညာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အားကစား၊ တေးဂီတ၊ စာပေနှင့်အနုပညာနယ်ပယ်များတွင်လူများ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားပါ။ စာရင်းသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်လူတိုင်းကိုစွမ်းရည်များပေးသည်။ ဇာစ်မြစ်အားလုံးသည်ကောင်းချီးများစွာခံစားခဲ့ရသည်။ အလင်း၏ခမည်းတော်ထံမှကောင်းမြတ်သောဆုကျေးဇူးအားလုံးပေးသူထံမှဤစွမ်းရည်များသည်မည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကမ္ဘာပေါ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းအများကြီးရှိပါတယ်။ လူတွေဟာဆင်းရဲခက်ခဲမှုတွေဖြစ်စေတဲ့မုန်းတီးမှု၊ လောဘကြီးမှု၊ သင်မည်မျှလေးနက်သည်ကိုသိရှိရန်ကမ္ဘာကြီးနှင့်၎င်း၏နိုင်ငံရေးအရ ဦး တည်ရာများကိုသာကြည့်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမကောင်းကိုကမ္ဘာတွင်ရောလူ့သဘောသဘာဝကိုပါတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို ယုံကြည်သူဟာ ကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မယ်လို့ ယေရှုပြောခဲ့တဲ့ စကားပါ။ ဘယ်အရာကနေ ကယ်တင်ခဲ့တာလဲ။ သူ သို့မဟုတ် သူမသည် ထာဝရသေခြင်းဖြစ်သည့် အပြစ်၏အခမှ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ အလားတူပင်၊ ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်၌ရပ်နေသောအခွန်ခံ၏ရင်ပတ်ကိုရိုက်ကာ “ဘုရားသခင်၊ အပြစ်ရှိသောကျွန်ုပ်ကို သနားတော်မူပါ” ဟုမိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ငါဆိုသည်ကား၊ ဤသူသည် တရားသဖြင့် မိမိအိမ်သို့သွား၏။ (လုကာ ၁8,1314) ။
အတိတ်က ကျရှုံးမှုတွေက ငါတို့ကို တစ်ယောက်တည်း မထားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အချို့သူများသည် စိတ်ပညာရှင်များထံ အဖြေရှာရန် သွားကြသည်။ သခင်ယေရှု၏သွန်းလောင်းသောအသွေးကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် မည်သည့်လူသား၏အကြံဉာဏ်ကိုမျှ မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ သခင်ယေရှုအားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်တွင်ပင် ခွင့်လွှတ်ခံရကြောင်း စိတ်ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌သာ လွတ်မြောက်ပါသည်။ ပေါလုပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ခရစ်တော်၌ရှိသောသူတို့အတွက် အပြစ်စီရင်ခြင်း မရှိပါ။ (ရောမ၊ 8,1).
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထပ်၍ပြစ်မှားပြီး “ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဝန်ခံပါက၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ပြီး မတရားမှုအားလုံးမှ ကင်းစင်မည်ကို သစ္စာစောင့်သိ၍ ဖြောင့်မတ်တော်မူမည်၊” (1. ဂျိုဟန် 1,9).
ကောင်းသောလက်ဆောင်များကိုပေးဆောင်သူ၊ အလင်း၏ခမည်းတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးကို ပေးလိမ့်မည်—ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားမိဘများလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ထက် များစွာပိုသည်ဟုလည်း ယေရှုကပြောခဲ့သည်။ ထွက်သွားမည်ဟု တပည့်တော်များအား အာမခံသော်လည်း ယောလ၌ပါရှိသည့်အတိုင်း ခမည်းတော်၏ကတိကို ပေးခဲ့သည်။ 3,1 ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတို့သည် ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟု ပရောဖက်ပြုထားသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့အပေါ် ဆင်းသက်လာပြီး ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်အားလုံးနှင့် အတူ ရှိနေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြောက်ရွံ့သောသဘောမဟုတ်၊ တန်ခိုး၊ မေတ္တာနှင့် သမ္မာသတိရှိသောဝိညာဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိကြပြီဖြစ်သည်။2. တိမောသေ 1,7) ဤတန်ခိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မကောင်းဆိုးဝါး၏တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး၊ သူ့ကို ဆန့်ကျင်ရန် ကူညီပေးသောကြောင့်၊ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ပြေးသွားနိုင်သည်။
ဂလာတိ 5,22-၂၃ ကျွန်ုပ်တို့၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ထုတ်ပေးသည့်အသီးကို ဖော်ပြသည်။ ဤအသီး၏အစတွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ မြှုပ်နှံထားသော သွင်ပြင်ကိုးမျိုးရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦးစွာချစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်၍ အိမ်နီးချင်းကို ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်နိုင်သည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ မေတ္တာသည် ပေါလုအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ 1. ကောရိန္သု 13 တွင် ၎င်းတို့အကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့် ချစ်ခြင်းဟူသည့်အရာသုံးမျိုး ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း သူကောက်ချက်ချသည်၊ သို့သော် အချစ်သည် ၎င်းတို့အနက်မှ အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကယ်တင်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်၏သားသမီးများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေသည်။ အခက်အခဲများပေါ်ပေါက်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုပ်ထွေးပြီးမျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ သို့သော်သခင်ဘုရားကိုစောင့်ဆိုင်းလျှင်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြတ်သန်းလိမ့်မည်။
ခိုင်ခံ့သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေဖြင့် အနှစ်ခုနစ်ဆယ်ကြာ ကောင်းမွန်သောအသက်တာကို ဆောင်နိုင်ပြီးနောက်၊ “ဖြောင့်မတ်သောသူသည် များစွာဆင်းရဲခံရသော်လည်း၊ ဤအရာတို့မှ သခင်ဘုရားသည် ကယ်မတော်မူသည်” (ဆာလံ ၃း၃)။4,20) ဘယ်လိုဆုတောင်းရမှန်းမသိတဲ့ အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီး နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကို ကျွန်ုပ်မေးခွန်းထုတ်စဉ်တွင်ပင်၊ သူသည် ကျွန်ုပ်အား အကျပ်အတည်းမှ ကူညီရန် စိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတော်နှင့် ဖန်ဆင်းခြင်း၏ ကြီးမြတ်မှုကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်ကို ကြည့်ရှုစေခဲ့သည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ယောဘကို “မြေကြီးကို ငါတည်ထောင်တုန်းက မင်းဘယ်မှာလဲ” လို့မေးတယ်။ (ယောဘ ၃8,4).
ယေရှုကလည်း “ငါသည် သင်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းကို စွန့်၍ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ငါပေး၏။ [ ... ] ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ” (ယော ၁4,27) အဆိုးရွားဆုံးသော လိုအပ်ချက်တွင် နားလည်မှုထက် သာလွန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပေးတော်မူ၏။
ထို့အပြင်၊ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အမြင့်ဆုံးလက်ဆောင်အဖြစ် ထာဝရအသက်နှင့် ထာဝစဉ်ရရှိမည့် ရွှင်လန်းသောမျှော်လင့်ချက်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်သည်၊၊ ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာများမရှိတော့ဘဲ မျက်ရည်အားလုံးကို သုတ်ပစ်မည့်နေရာ (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၊1,4).
ကယ်တင်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းနှင့်သာမန်စိတ်များသည်ယုံကြည်သူအားပေးခဲ့သောကောင်းမြတ်သောဆုများသာဖြစ်သည်။ မင်းကတကယ့်ကိုတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ယရှေုသညျသူတို့အထဲမှထကျ ပို၍ တကယျတကယျရှိသညျ။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သာမန်အသိစိတ် - ခမည်းတော်ထံမှပေးသောအကောင်းဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံးဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်။
ယုံကြည်သူမဟုတ်သူများ၊ ဘုရားမဲ့ဝါဒီများ၊ မသိသူများ (သို့) ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးရှိသူများသည်ဤဆုကျေးဇူးများကိုလည်းခံစားသင့်သည်။ ယေရှုခရစ်၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကိုဘုရားသခင်ပေးမည်ဟုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်အသက်တာသစ်နှင့်ကောင်းသောလက်ဆောင်များကိုပေးကမ်းသူသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားသခင်နှင့်ဘုရားသခင့်ဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ကြုံခံစားရမည်။ သင့်မှာရွေးချယ်စရာရှိသည်။
Eben D. Jacobs ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်